Maxamed Saalax oo SAWIRKAN ku weeraray Xukuumada Dalkiisa Masar….(SHEEKO YAAB leh oo ka dambeysa) – Gool FM
Maxamed Saalax oo SAWIRKAN ku weeraray Xukuumada Dalkiisa Masar….(SHEEKO YAAB leh oo ka dambeysa)
Byare November 27, 2018
(England) 27 Nof 2018. Maxamed Saalax ayaa Baraha Bulshada soo dhigay Sawir ay ka muuqdaan Labadiisa Bisad/Yaan Yuur taa oo uu ku weerarayo Xukuumada dalkiisa hooyo ee Masar.
Warsidaha Al-Araby, ayaa ka dhawaajiyay in Dowladda Masar ay Amar ku bixisay in la dhoofiyo ilaa 4,000 oo Xawayaano oo isugu jira Eeyo Iyo Bisado oo aan la hayn hooy iyadoo loo dhoofinayo dalal kale oo laga cuno xayawaanadaan, ma ahan lagu xanaaneeyo ee waa dalal cunto aahaanba looga cuno.
Inkastoo ay xukuumada Egypt beenisay warkaan ayuu misane Maxamed Saalax Baraha Bulshada soo dhigay Sawir ay kula jiraan labadiisa Bisad uu sida wayn u xanaaneeyo isagoona soo raaciyay qoraal u dhacaya:
“Bisadaha Iyo Eeyaha meelno looma dhoofin doono. Ma dhici doonto midaa.”.
Maxamed Saalax ayaa aad looga aamisan yahay dalkiisa waxaana loo arkaa Geesi iyadoo ayna barihiisa Bulshada ku xiran yihiin ilaa 28-milyan.
Mid u hadlay Wasaarada beeraha ee Masar ayaa wararkan la isla dhex qaadayo ku sheegay mid aan sal Iyo baar lahayn. Laakiin saas ay tahay Maxamed wuu muujiyay sida wayn uu uga soo horjeedo in Bishadaha Iyo Eeyaha loo dhoofiyo dalal Cuno ahaan u isticmaalaya.
Muxuu ka yiri Dani Carvajal kulanka adag ay caawa ku wajahayaan kooxda Roma tartanka Champions League?
Massimiliano Allegri oo ka warbixiyay kooxda ugu cad cad ee sanadkan ku guuleysan karta tartanka Champions League